Abahlinzeki bamazinyo abamhlophe bamazinyo neFektri | China Amazinyo mhlophe isibani Abakhiqizi
isilawuli senzwa 60w 12pcs ikhanyisa umshini wamazinyo mhlophe
Lo mshini oyisibonelo wokuba mhlophe kwamazinyo yiyona enamandla kunazo zonke, i-60w, i-12pcs isibani esiholele okwesibhakabhaka, isilawuli senkinobho yokulawula inzwa, umbono wokunethezeka, umshini wokugaya amazinyo aphezulu, sifuna abenzeli, uma unentshisekelo, sicela uthumele uphenyo kithi .
amazinyo mhlophe umshini TE120 onekhadi noma ngaphandle kwalo
Lo mshini omhlophe wamazinyo uthandwa kakhulu iminyaka eminingi. inamalambu ayi-12pcs amancane ngaphakathi kwekhanda futhi ingasebenzisa ikhadi le-RF IC, noma ngaphandle kwekhadi le-RF IC uma ungayidingi.
Kwaholela mhlophe mhlophe umshini nge touch screen
Lo mshini oyisibonelo owenza mhlophe amazinyo wenziwe nge-touch screen, futhi ungaba nekhamera, ukukusiza uthathe izithombe zamazinyo, futhi uthathe ukwelashwa ngaphambi nangemva kokwelashwa kokumhlophe kwamazinyo.
Ukuthengisa okushisayo isibani esimhlophe samazinyo aholele umnotho
Lo mshini oyisibonelo wokuba mhlophe kwamazinyo ungokwezimali futhi uyasebenza ekwelashweni okwenziwa mhlophe kwamazinyo, nge-8pcs ukukhanya okuholele okwesibhakabhaka, sisekela i-logo yomkhiqizo we-oem emshinini, sifuna abasabalalisi.
Easy ukufakwa amazinyo mhlophe umshini nge icala
Lo mshini oyisibonelo wokuba mhlophe kwamazinyo yiyona ethengisa kakhulu, inecala leselula, ungayithatha noma ikuphi ukwelashwa ngamazinyo, futhi ukwakheka kuyindlela elula futhi elula, wamukelekile ukuthumela uphenyo ukuze uthole imininingwane ethe xaxa.
Umshini wokugcoba omhlophe wamazinyo okhokhelwayo
Isibani samazinyo amhlophe amakhulu sinamandla angama-60W aphezulu, izinga lokushisa elingaguquguquki ukuthola ulwazi olungcono, ama-12pcs Osram aluhlaza okwesibhakabhaka aholele ukukhanya. into ebalulekile, ungakwazi ajust amandla nokukhanya ngokuya ngezimo ezahlukene izinyo.
Izinsiza ezintathu zokukhanyisa amazinyo wokuthinta umthombo wokukhanya omncane
Lo mshini oyisibonelo wokumhlophe kwamazinyo ukwakhiwa kwemfashini, unomsebenzi wokuthinta ama-screeen, kulula ukuwusebenzisa, futhi unomthombo ohlukile wokukhanya, osebenza kahle ekwelashweni okwenziwa mhlophe kwamazinyo.
umshini wokuthengisa oshisayo wamazinyo aluhlaza okwesibhakabhaka
Lo mshini oyisibonelo wokugcoba amazinyo ujwayelekile, siwuthengise iminyaka eminingi, ikhwalithi yinhle, futhi intengo ingokwezomnotho, inamalambu ayi-8pcs aluhlaza okwesibhakabhaka, amandla angama-40w, singangeza uphawu lwakho lomkhiqizo emshinini, thina ingakunika ukusekelwa uma ufuna ukuba ngabasabalalisi bendawo, sicela uthumele uphenyo kithi uma unentshisekelo, sizophendula ngokushesha.
Umshini we-LED isibani samazinyo omhlophe
I-TE300 iyimodeli yakudala, inezinhlobo ezi-3 zokukhanya okuholelekile, ukukhanya okungu-2pcs okubomvu okuholelekile, ama-5pcs ukukhanya okuholele okwesibhakabhaka no-8pcs ukukhanya oku-purple. Ukuphakama kwesiphathi sesibani nengalo yesibani kungashintshwa, i-Operation ilula kakhulu.
Imodeli yeselula yamazinyo emhlophe yesibani
Lesi sibani esimhlophe samazinyo siyimodeli eyisisekelo, amalambu ayi-12pcs aholelekile, ukwakheka okungaqondile, ukusebenza okulula. okubaluleke kakhulu, lo mshini unebhokisi le-aluminium alloy mobile, ungathatha umshini uye kunoma iyiphi indawo, Ungagodla izinsizakalo zasekhaya zamakhasimende akho, Kwenza insizakalo yokwenza mhlophe kwamazinyo ibe lula kakhulu.
Umshini we-LED wamazinyo wesibani wamazinyo amhlophe
Isibani esihle samazinyo esimhlophe sokwakha, ama-8pcs aholele ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, umzimba ohambayo, ungalungisa ukuphakama kwekhanda ngokuya ngezidingo zakho.Kunokhiye wokulawula ukuthinta, ungaqinisa amandla, bese usetha isikhathi sokwelashwa.
umbala omnyama wesibani mhlophe
Lo mshini oyisibonelo wokugcoba amazinyo ujwayelekile, sithengise iminyaka eminingi, ikhwalithi nempendulo kuhle, amalambu angama-40w nama-8pcs aholelekile, ubuchwepheshe bungasetshenziselwa ukwenza mhlophe amazinyo e-salon noma emtholampilo wamazinyo.sifuna ama-ejenti emhlabeni wonke.